Ekhaya | Yuyue
I-Usb 2.0 Hub
Usb Uhlobo C Hub
Uhlobo lwesitishi sokuCofa indawo
I-Usb 3.0 Hub
Intambo ye-HDMI ye-HD
Ukulungelelaniswa kwe-4K ye-HD kunye nokudityaniswa kwevidiyo.
Kuzibophelele ekuboneleleni abasebenzisi ngezisombululo ezizonke zokufikelela kwidijithali Iimveliso zibandakanya uchungechunge lolwandiso lwekhompyuter yechungechunge, uchungechunge lokudluliselwa kwentsimbi yedijithali, uthotho lwedijithali yokudluliselwa kwedijithali, i-USB2.0 / 3.0 / 3.1 usb-c uthotho lokudlulisela, uthotho lwe-SlimPort, uchungechunge lwe-HDMI.
Ukutshaja kwakhona kokuKhanya kwe-LED ukulenga intamo ye-USB ukutshaja iMani encinci
Ukutshaja kwakhona kokuKhanya kwe-LED ukulenga intamo ye-USB ukutshaja iMani encinci I-USB enokutshaja kwakhona ukukhanya kwesibane seLazy Hanging Neck Fan Izandla eziSimahla zeNeckband yezemidlalo yeFan yokuHamba ngeKampu 2000mAh Ibhetri egcwalisekayo: Inokuxhotyiswa ize iphinde igcwaliswe zizo zonke izixhobo ze-5V ezikhutshiweyo ze-USB (ezinje ngeebhanki zamandla, iikhompyuter, njl. Nje ukuba igcwaliswe ngokupheleleyo, ibhetri ingasebenza iiyure ezingama-2-8. 3 Isantya esihlengahlengiswayo: Iseto esezantsi / esiPhakathi / esineSantya esiphakamileyo sihlangabezana neemfuno zakho zesantya somoya ezahlukeneyo. Esona santya siphezulu somoya sivuthuza umoya kwi-5.9M / S! Phawu: 1. Isandla sasimahla kunye noyilo lwentloko: Xa uhamba, ngokuqinisekileyo awufuni kubamba ifeni, uyilo olwahlukileyo lwesandla kunye noyilo lwentloko, ngaloo ndlela unokuxhoma ifeni entanyeni yakho. 2. I-LED + i-360 ° eFanayo eguqukayo yeFan, epholileyo ephindwe kabini: Ngemo eguqukayo ye-LED, Ifanelekile kwezemidlalo / ekufundeni ebusuku.Le fan fan ye-neckband inokuhlengahlengisa indlela eya kwi-360 °, ekuvumela ukuba ufumane owona moya ufanelekileyo. 3. Inqanaba lesantya esiLungelelanisiweyo: I-fan blade uyilo lwamagqabi asixhenxe, umoya unamandla ngakumbi. Uninzi lwabalandeli kwimarike luyilelwe ngamagqabi amathathu. Umoya mncinci kakhulu kunye nengxolo ephantsi. Esi sandla somntu simahla sinezinga eliphantsi / eliphakathi / eliphakamileyo. 4. Ifeni egcwalisekayo ye-USB: Ibhetri ye-lithium ye-2000mAh etshajekayo eyakhelweyo ngaphakathi, ungayibiza ifeni ngentambo ye-USB. Kwaye intambo ye-USB eza nefeni ehambelana nayo nayiphi na izibuko le-USB, njengekhompyuter, iilaptops, ibhanki yamandla, kunye nesokethi eqhelekileyo njalo njalo. 5. Ukusetyenziswa okubanzi kunye neWaranti: Le fan ephathekayo ilungele ukupholisa ubuqu, iofisi, imisebenzi yangaphandle, enje ngenkampu, iihambo, ukunyuka intaba, ukunyuka nokubukela ezemidlalo njl.njl. Phawula: Iphakheji iqulethe i-fan egcwalisekayo, intambo yokutshaja i-USB, incwadana yomsebenzisi, akukho oli / iziqholo zibalulekileyo. Ngaphambi kokuba usebenzise ifeni yokupholisa ye-neckband, nceda uqiniseke ukubopha iinwele ezinde ukuthintela ukwenzakala. Ingcaciso yeMveliso: Izinto zeMveliso: IPlastiki yeABS kunye neSilicone Ubungakanani bemveliso: 190 * 230 * 30mm Uyilo: Iigiya ezi-3 zihlengahlengiswa UkuKhanya kwezixhobo: 2 Ukufaka Igalelo: DC5V 1A Ixesha lokutshaja: Iiyure ezi-3 Imodeli yeBhetri: 18650-3.7V 2000MAH Imoto: I-DC Brushless Motor Ubunzima: 185g Uhlobo: I-USB Neck Hanging Fan Isipho sika: Abahlobo (Umhla wokuzalwa. IKrisimesi. Unyaka Omtsha weZipho) Uluhlu lokusetyenziswa: ikhaya / isikolo / iofisi / ngaphandle Ukugcinwa kwemveliso: Musa ukubeka iminwe yakho kwi fan, Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6 kufuneka bancediswe ngumgcini. 1.Ukuyila okuxhonyiweyo: Uyilo oluyingqayizivele lwentamo ejingayo, eyahlukileyo kunesimbo sangaphambili sokuyila, uyilo lwabalandeli luyaguquguquka, lunokuqhutywa ngeenxa zonke, kwaye ukukhanya okuguqukayo kukwenza ubambe amehlo ngakumbi xa wonwabele ukuphola kwe fan. Kuyimfuneko ukuba ubenakho ehlotyeni Ukusetyenziswa kotshintsho: Le fan yentamo ixhonyiweyo encinci inokugoqwa, ke uneendlela ezahlukeneyo zokuyisebenzisa, intloko yale fan inokujikwa kuma-360 degrees. (1) Inokuxhonywa entanyeni (2) Guqula ubume bayo, uyibeke phezu kwetafile kwaye uyisebenzise (3) Inokusetyenziswa kwakhona esandleni. 3. Isantya somoya esitshintshatshintshayo: (1) Isantya esisezantsi: Umoya opholileyo kunye namava entofontofo (2) Isantya esiphakathi: Ukuhlaziya okuza kususa ubushushu (3) Isantya esiphezulu: Isantya somoya onamandla, amaxesha apholileyo eza kuwe 4. Izibane zemilingo eziguqukayo ze-LED: Uyilo olukhethekileyo lwezibane ze-LED zikuvumela ukuba ukonwabele ukuphola ngelixa utsala umdla. Kukho imibala emi-4 yomnyama, kwaye kukho izibane ezimhlophe ezimhlophe ezikhanyayo. Unokukhetha phakathi kweendlela ezimbini. 5. Ifeni egcwalisekayo ye-USB: Ukutshaja ngokupheleleyo kungasebenza iiyure ezi-2-8. Kukulungele ukuqhuba naphi na nangaliphi na ixesha. Ukhetho olufanelekileyo loSuku lweSikolo, iSipho sokuzalwa.
Ubunzima bokuKhanya ku-3 ku-1 Uhlobo lwe-C olubambekayo lokutshaja i-Mini Fan
Ubunzima bokuKhanya ku-3 ku-1 Uhlobo lwe-C olubambekayo lokutshaja i-Mini Fan Yenziwe ngentando Ilogo yokuNika iMini 2/3 Ku-1 Uhlobo C lwe-IP ye-IP ephathekayo yeFan yeSelfowuni Zonke iimodeli zine: Ujongano lwe-Android, ujongano lweApple, Android + USB, Apple + Android. Igama leMveliso: 2 in1 yefowuni mini fan / 3 kwi-1 yefowuni mini fan / mini ifowuni fan Ubungakanani: 9cmx3.8x4.3cm Qaphela: 5V Amandla: 1W Umbala: Mhlophe, Mnyama, Bomvu, Orenji, Luhlaza, Luhlaza Izinto -: I-TPE + ABS Iinkcukacha zokuPakisha: Ingxowa ye-PP yento nganye Ingcaciso yeMveliso: Ye-iPhone5 / 5S / SE / 6 / 6S / 6S Plus / 7/7 Plus / 8 / 8Plus / X YeHUAWEI / XIAOMI / BLACKBERRY / SAMSUNG / OPPO / VIVO / OnePlus Mhlophe, Orenji, Luhlaza, Pinki, Mnyama, Luhlaza, mibala eyahlukeneyo 100% kraca kraca kwaye kumgangatho ophezulu Iinguqulelo zeemoto ezili-16000 ukujika Imoto inokusebenza ngokuqhubekayo iiyure ezili-100 + TPE izinto zokukhusela indalo Akukho bhetri, yi-USB / Micro USB / Umbane / Uhlobo-C lwaMandla oMbane Uyilo oluguqulweyo olwahlukileyo, Inobunzima bokukhanya Umoya ovuthuzayo, ingxolo ephantsi kunye nokuGcina amandla Ixesha elide lokusebenza kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi Ingxolo ephathekayo, ephantsi, umgangatho oqinisekisiweyo ngobomi obude bokusebenza
Ukukhanya kobusuku obugcinwe ngesandla kwi-USB yokutshaja iMani encinci
Ukukhanya kobusuku obugcinwe ngesandla kwi-USB yokutshaja iMani encinci Isiphatho esincinci esiphathwayo ngesandla sokuKhanya kwasebusuku ukuKhanya kweFanitshala ye-USB enokuBuyiswa kwakhona kweFan ngeSucker yefowuni I-USB ephathekayo egcwalisekayo ye-Mini Mini yabalandeli beFowuni yokuBamba iSucker Fan 800mAh Ibhetri egcwalisekayo: Inokuxhotyiswa ize iphinde igcwaliswe zizo zonke izixhobo ze-5V zokukhupha izixhobo ze-USB (ezinje ngeebhanki zamandla, iikhompyuter, njl. Nje ukuba igcwaliswe ngokupheleleyo, ibhetri ingasebenza iiyure ezingama-2-3. 2 Isantya esihlengahlengiswayo: Iseto esisezantsi // Isantya esiphakamileyo sihlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo zesantya somoya. Esona santya siphezulu somoya sivuthuza umoya kwi-5.9M / S! Phawu: 1. Ifeni ephathekayo yobungcali ngokudityaniswa koyilo, ukubonakala okulula kunye nesakhiwo esiqinileyo. 2. I-fan egcwalisekayo ye-sucker fan ene-folding suction yefowuni yefowuni, inkqubo yolawulo ekrelekrele, ukusebenza okuthembekileyo, okusebenza ngokupheleleyo kwaye kulula ukusebenza. 3. Sebenzisa ibhetri ye-lithium yebhetri yamandla aphesheya (ibandakanyiwe), enokuphinda isetyenziswe iphinde ihlawuliswe ngetshaja ye-USB, ikhompyuter kunye nebhanki yamandla. 4. Uyilo lwe fan ekhethekileyo ephathekayo, isitayile sokuyila, esenziwe ngomgangatho ophezulu weABS + abicah, inesakhiwo esomeleleyo noxinzelelo. 5. Isantya esinamandla sokutshintsha amandla ombane, cima okanye ucime umoya ngobuchwephesha besantya esiphezulu setekhnoloji, efanelekileyo kwaye ugcine amandla. 6. Ifeni egcwalisekayo ye-USB: Ibhetri ye-lithium eyakhelweyo eyakhiweyo eyakhelweyo ngaphakathi kwi-800mAh, ungayihlawulisa fan ngentambo ye-USB. Kwaye intambo ye-USB eza nefeni ehambelana nayo nayiphi na izibuko le-USB, njengekhompyuter, iilaptops, ibhanki yamandla, kunye nesokethi eqhelekileyo njalo njalo. Phawula: Iphakheji iqulethe i-fan sucker fan, intambo yokutshaja i-USB, incwadana yomsebenzisi, akukho oli / iziqholo ezifanelekileyo. Ngaphambi kokuba usebenzise ifanitshala yokufunxa, nceda uqiniseke ukuba ubopha iinwele ezinde ukuthintela ukwenzakala. Ingcaciso yeMveliso: Izinto zeMveliso: I-ABS Plastic + Silicone Uyilo: Iigiya ezi-2 ezihlengahlengiswayo Ukufaka Igalelo: DC5V 1A Ixesha lokutshaja: Iiyure ezi-3 Imodeli yeBhetri: 18650-3.7V 800MAH Imoto: I-DC Brushless Motor Uhlobo: I-USB Sucker Fan ngeFowuni Isipho se: Abahlobo (Umhla wokuzalwa. IKrisimesi. Unyaka Omtsha weZipho) Uluhlu lokusetyenziswa: ikhaya / isikolo / iofisi Ukugcinwa kwemveliso: Musa ukubeka iminwe yakho kwi fan, Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6 kufuneka bancediswe ngumgcini.
Ifowni enokutsalwa kwi-2000 MAh yokutshaja i-USB Mini Fan
Ifowni enokutsalwa kwi-2000 MAh yokutshaja i-USB Mini Fan I-fan ephathekayo ye-Desk ye-Desk enesiphatho sefowuni esingabanjwayo sangaphakathi 2000mAh Ibhetri egcwalisekayo: Inokuxhotyiswa ize iphinde igcwaliswe zizo zonke izixhobo ze-5V ezikhutshiweyo ze-USB (ezinje ngeebhanki zamandla, iikhompyuter, njl. Nje ukuba igcwaliswe ngokupheleleyo, ibhetri ingasebenza iiyure ezingama-2-6.5. 3 Isantya esihlengahlengiswayo: Iseto esezantsi / esiPhakathi / esineSantya esiphakamileyo sihlangabezana neemfuno zakho zesantya somoya ezahlukeneyo. Esona santya siphezulu somoya sivuthuza umoya kwi-5.9M / S! Phawu: 1. Umtsalane ophathwayo ohambelana nokudityaniswa koyilo, ukubonakala okulula kunye nolwakhiwo oluqinileyo. 2. I-fan egcwalisekayo yedesika yedesika enesiphatho sefowuni esinokutshintshwa, inkqubo yolawulo ekrelekrele, ukusebenza okuthembekileyo, okusebenza ngokupheleleyo kwaye kulula ukusebenza. 3. Sebenzisa ibhetri ye-lithium yebhetri yamazwe aphesheya (ngaphandle), enokuphinda isetyenziswe iphinde ihlawuliswe ngetshaja ye-USB, ikhompyuter kunye nebhanki yamandla. 4. Uyilo lwe fan ekhethekileyo ephathekayo, isitayile sokuyila, esenziwe nge-ABS ekumgangatho ophezulu, inesakhiwo esomeleleyo kunye noxinzelelo. 5. Isantya esinamandla sokutshintsha amandla ombane, cima okanye ucime umoya ngobuchwephesha besantya esiphezulu setekhnoloji, efanelekileyo kwaye ugcine amandla. 6. Ifeni egcwalisekayo ye-USB: Ibhetri ye-lithium ye-2000mAh etshajekayo eyakhelweyo ngaphakathi, ungayibiza ifeni ngentambo ye-USB. Kwaye intambo ye-USB eza nefeni ehambelana nayo nayiphi na izibuko le-USB, njengekhompyuter, iilaptops, ibhanki yamandla, kunye nesokethi eqhelekileyo njalo njalo. Phawula: Iphakheji iqulethe i-fan egcwalisekayo, intambo yokutshaja i-USB, incwadana yomsebenzisi, akukho oli / iziqholo zibalulekileyo. Ngaphambi kokuba usebenzise ifeni yedesika, nceda uqiniseke ukubopha iinwele ezinde ukunqanda ukwenzakala. Ingcaciso yeMveliso: Izinto zeMveliso: IPlastiki ye-ABS Uyilo: Iigiya ezi-3 zihlengahlengiswa Ukufaka igalelo: DC5V 0.8A Ixesha lokutshaja: Iiyure ezi-2.5 Ixesha lokusebenza: isantya esisezantsi, 6.5 iiyure, isantya esiphakathi, iiyure eziyi-3.5, isantya esiphezulu, iiyure ezi-2 Imodeli yeBhetri: 18650-3.7V 2000MAH Imoto: I-DC Brushless Motor Uhlobo: I-USB Desk Fan ene-Holder yeFowuni eFumanekayo Isipho se: Abahlobo (Umhla wokuzalwa. IKrisimesi. Unyaka Omtsha weZipho) Uluhlu lokusetyenziswa: ikhaya / isikolo / iofisi Ukugcinwa kwemveliso: Musa ukubeka iminwe yakho kwi fan, Abantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6 kufuneka bancediswe ngumgcini.
Inkampani yethu izibophelele ku R
& Iimveliso ze-D, ziyanelisa iimfuno zabathengi bethu.
Isiqinisekiso sobulunga bemveliso yethu ziinyanga ezili-12.
Iqela lethu lenkonzo liya kuphendula umbuzo malunga neeyure ezi-2.
Umthamo wethu we-OEM / ODM:
Ngaphezulu kwe-1 000 yemitha ye squre, ngaphezu kwe-50 yabasebenzi abanezakhono, iilayini ezi-2 zendibano, iseti ezimbini zomatshini wokubumba inaliti, iseti emibini yomatshini ophindaphindeneyo, iseti enye yomatshini wokutsala, 2 isixhobo sembiza yokuthengisa, kunye nomatshini ocekeceke wedijithali. , I-pneumatic stripper. Inyanga nganye idlula iiyunithi ezingama-30,000.
I-Shenzhen Yuyue Electronic Technology Co, Ltd eyasekwa ngonyaka ka-2009, ekhethekileyo kwi-USB HUB, kwi-TYPE-C eDocking Station
& IAdapter yenethiwekhi
& I-Adapter yenethiwekhi.Omva kweminyaka eli-11 yokuvelisa, iye yaba ngumenzi ophambili kulo mhlaba.
Lishishini eliphakamileyo lobugcisa elidibanisa uphando kunye nophuhliso, uyilo, umveliso kunye nentengiso. Kuzibophelele ekuboneleleni abasebenzisi ngezisombululo ezizonke zokufikelela kwidijithali Iimveliso zibandakanya uchungechunge lolwandiso lwekhompyuter yechungechunge, uchungechunge lokudluliselwa kwentsimbi yedijithali, uthotho lwedijithali yokudluliselwa kwedijithali, i-USB2.0 / 3.0 / 3.1 usb-c uthotho lokudlulisela, uthotho lwe-SlimPort, uchungechunge lwe-HDMI.
UKUBA uneminye imibuzo, BHALA US
Sixelele iimfuno zakho, sinokwenza ngaphezulu kunokuba unokucinga.